Wareysi ku saabsan muranka ka dhex abuurmay FIFA - BBC News Somali
Wareysi ku saabsan muranka ka dhex abuurmay FIFA
15 Maajo 2016
Xiriirka kubadda cagta aduunka, FIFA, ayaa wajahaya muran horleh ka dib markii uu iscasilay mid ka mid ah dadka hormuudka ka ah isbedelka lagu sameynayo ururkaasi.
Domenico Scala, oo ahaa madaxa hanti-dhowrka iyo waafaqsanaanta FIFA, ayaa sheegay in isbedelka hadda socda uu minja-xaabinayo madax bannaanida gudiyada, isla markaana uu caqabad ku noqon doono baaritaannada ay wajihi karaan mas'uuliyiinta FIFA.
Waxa uu sheegay inuu ka xumaaday go'aan golaha maamula FIFA lagu siinayo awood uu ku magacaabi karo ama xilka uga qaadi karo xubnaha gudiyada madaxa bannaan, gaar ahaan kuwa dusha kala socda anshaxa iyo maaliyada ururka.
Haddaba si aan arrimahaasi waxbadan uga ogaano ayaa waxaan la xiriirnay Gudoomiyaha Xiriirka Kubada Cagta Jabuuti, Suleymaan Xasan Waaberi, oo ka qeybgalaya kulanka xubnaha FIFA ee Mexico ka socda. Khadka telefoonka ayuu Suheyba Maxamed Badqas ugu warramay.